रोल्पा र रोल्पालीको सुरक्षामा हरक्षण ध्यान दिनेछु ।– – रोल्पा समाचार
२०७७ आश्विन ३, शनिबार १४:५८ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७७ आश्विन ३, शनिबार १४:५८ गते
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा
नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालयबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले मिति २०७७ साल भाद्र महिनाको २२ गतेदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैै आउनुभएको छ । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जोखिम पूर्ण अवस्थामा पनि नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको अवस्था छ । नव आगुन्तक प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीसँग जिल्लाको शान्ति सुरक्षा लगायतको विषयवस्तुमा रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशक÷सम्पादक मानसिंह विश्वकर्माले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
@तपाईको परिचय बताई दिनुहुन्छ कि ?
मन्थली न.पा.१ रामेछाप मेरो घर हो । म संयुक्त परिवारमा बस्छु । मैले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर ः।ब्। उत्तिर्ण गरेको छु । मिति २०७७र०५÷२२ गतेदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको जिम्मेवारी सम्हाली रहेको छु ।
@तपाई कहिलेदेखि राष्ट्रसेवकको सेवा क्षेत्रमा लाग्नु भएको हो त ?
मिति २०६१÷०२÷१५ गतेबाट म प्रहरी निरीक्षकको रुपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ ।
@ तपाईलाई राष्ट्र सेवकमा सेवा गर्ने धारणा एवं प्रेरणा कसरी पाउनु भएको हो त ?
 संसारमा सबैभन्दा ठूूलो सेवा भनेको नै मानवीय सेवा हो । मानवीय सेवा गर्ने उद्देश्यले नै म प्रहरी सेवामा भर्ना भएको हुँ । मेरो पहिलो रोजाई नै प्रहरी सेवा थियो । स्नातक तह उत्तिर्ण गर्ने वित्तिकै मैले प्रहरी सेवामा प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ । पहिलो प्रयास मै उतिर्ण हुन सफल भएँ । प्रहरी सेवा मेरो रहरको क्षेत्र हो ।
@ कुन–कुन क्षेत्र तथा स्थानमा काम गर्दै रोल्पामा प्रहरी नायब उपरीक्षकको भूमिकामा आउनुभएको हो ?
मैले सेवामा प्रवेश गरेदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विद्यालय, विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, विभिन्न ईलाका प्रहरी कार्यालयहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रही काम गरेको छु भने वैदेशिक सेवा अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघिय शान्ति स्थापनार्थ मिसन सुडानमा १ वर्ष र हाईटिमा १ वर्ष काम गरेको छु ।
@ तपाईले रोल्पा बाहिरबाट सुनेको, बुझेको रोल्पा तपाई आफै आएर कार्य सम्पादन गर्दा रोल्पालाई कसरी हेर्नुभएको थियो ?
राजनैतिक परिवर्तनमा आफ्नो छुट्टै महत्व र पहिचान बनाएको रोल्पा भन्ने वित्तिकै हरेक मानिसको मनमा द्वन्दको समयको स्मरण आउने गर्दछ । रोल्पा प्राकृतीक रुपले अत्यन्त सुन्दर, कला सस्कृतीको धनी जिल्ला हो । यहाँका नागरिकहरू अत्यन्त मिलनसार, सहयोगी र सकरात्मक सोच राख्ने हुनुहुन्छ । विकास र सम्वृद्धमा रोल्पा धेरै अगाडी बढीसकेको मैले पाएँ । छोटो समयमानै उल्लेख्य सम्वृद्ध हासिल गर्न सक्ने सम्भावना देखेको छु ।
@ रोल्पामा सुरक्षा चुनौती र सम्भावना के–कस्ता बुझ्नुभएको छ त ?
समग्र हिसावमा हेर्दा रोल्पा जिल्लाको शान्ती सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । यहाँको भूगोल नै पहिलो चुनौती हो । किनभने कुनै पनि समयमा ईमरजेन्सिको अवस्थामा प्रहरी परिचालनमा भूगोल कै कारणले केही कठीनाई हुने महशुस गरेको छु । सुख्खा पहिरो पनि गईरहने रैछ । चुनौती भित्रैबाट अवसर र सम्भावना खोज्दै काम गर्दै जाने हो ।
@ रोल्पालाई सुरक्षा तथा समन्वयमा कसरी अगाडी बढाउने योजना लिनुभएको छ ?
अहिले सबै ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रहरीलाई काम गर्न सजिलो छ । नगरपालिकाका मेयर ज्यु, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्युहरू लगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनासँग पनि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्छ । दीगो शान्ति कायम गर्न जिल्लामा रहनु भएका सम्पूर्ण राजनैतिक दलका प्रतिनिधि ज्युहरू, विभिन्न संघ–संस्था तथा पत्रकार ज्युहरुसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्दछ । सहमती र सहकार्यले नै नागरिक र प्रहरी बीचको विश्वासमा अभिवृद्धि हुन जान्छ भने त्यसबाट नै दीगो शान्ति कायम हुन जान्छ ।
@रोल्पा जिल्लामा कस्ता खाले अपराधको प्रकृति बढी रहेका छन् ?
रोल्पा जिल्लामा महिला हिंसाका घटनाहरू अन्य घटनाहरूका तुलनामा अली बढी विभिन्न डाटाहरूबाट देखिन्छ । यस्ता घटनाहरूलाई न्युनिकरण गर्न शिक्षा र सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार तथा स्वामित्व स्थापित गराउनु पर्छ । निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको जरुरी देखिन्छ । पुरुषमा विद्यमान शासकीय चरित्रमा सुधार हुनु पर्ने तथा महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा पनि परिवर्तन हुन जरूरी छ ।
@ विषय प्रसंग बदलौ सुरक्षा चुनौतीमा नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा रहेको नेकपाको गतिविधि कस्तो छ रोल्पामा ?
आफु भरखरै जिल्लामा आएको हुनाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि बारे सूचना संकलन तथा अध्ययन गरिरहेको छु । कुनै पनि गतिविधिहरू भए गरेको पाईएमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले दिएको निर्देशन वमोजिमको कारवाही प्रक्रिया शुरू गरिने छ ।
@ फेरी अर्को विषयमा कुरा गरौँ, कोरोनाको महामारी छ सुरक्षाकर्मी टोली पनि फ्रन्ट लाईनमा रोल्पा जिल्लामा प्रहरीमा संक्रमितको अवस्था कस्तो छ ?
कोरोनाको महामारी छ । सुरक्षाकर्मीहरू फ्रन्ट लाईनमा बसेर काम गर्नु पर्दछ । सकेसम्म कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् भनेर उच्च सजगता अपनाउँदै स्वास्थ्य प्रोटोकल समेतलाई ध्यान दिई काम गरिरहेका छौं । व्यारेक तथा मेसमा डिसईन्फेक्ट्यान्ट गर्ने काम भईरहेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीमा एक जना प्रहरीलाई कोरोना पोजेटीभ देखिएको छ । निज प्रहरी काठमान्डौबाट सरुवा भई आएको र क्वारेन्टीनमा नै बसिरहेको अवस्थामा कोरोना पोजेटिभ दैखिएको हो । अन्यलाई छैन् ।
@रोल्पा जिल्लामा प्रहरीले सचेतना अपनाउनको लागि पटक– पटक सूचना जारी गर्दा पनि मास्क नलगाएर हिड्ने वा प्रहरीको चेक पोष्टमा मात्रै लगाउने नागरिकहरूलाई के कारवाही गर्नुहुन्छ ?
कोरोना नियन्त्रणको लागि नागरिकमा स्वःअनुशासनको भावना वृद्धि हुनुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफु बाहेक अरु सबैलाई कोरोना पोजेटिभ हुन् सक्छ भनी उच्च सावधानी अपनाउने, स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने, घरबाट बाहिर निस्कदा मास्क लगाउने, दुई मिटरभन्दा बढी दुरीमा रहने, समय–समयमा सावुन पानिले हात धुने गर्नुपर्दछ । हामीले सचेत गराउँदै माईकिङ पनि गरिरहेका छौं । मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कारवाही पनि गरिरहेका छौं ।
@ प्रहरीले कोरोना भत्ता नपाएको गुनासो रोल्पामा पनि छ त ?
कोरोना भत्ता पाईएन भनी हामीहरू गुनासो गरेर बस्दैनांै । हामी हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारीप्रति अत्यन्त सजग छौं र संवेदनशिल छौं । अहिलेको समयमा कोरोना भत्ता हाम्रो प्राथामिकता हैन् । नागरिकको सेवा र सुरक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो ।
@रोल्पा जिल्ला घटना घटेको लगत्तै उद्वार तथ नियन्त्रण गर्नको लागि यातायातको साधनहरू प्रर्याप्त छैनन् भन्ने छ के हो वास्तविकता ?
अहिले उद्वार तथा नियन्त्रणको कार्यमा सुरक्षा निकायहरूसंगै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि खटिरहनु हुन्छ । उद्वार कार्यको लागि यातायातका साधनहरू पर्याप्त छैन भनेर त म भन्दिन । तर, स्थानीय निकायहरू पनि यस बिषयमा गम्भिर रहेको मैले पाएको छु । विपदको समयमा उद्वार कार्य गर्दै जीवन रक्षाको लागि यातायतका साधनहरू मात्रै नभएर सडक पूर्वाधार तथा सुविधा सम्पन्न अस्पताल पनि जरूरी पर्दछ ।
@ कतिपय प्रहरी चौकीहरू अझै पनि व्यक्तिको घरमा भाडाँ लिएर बस्दै आएको छन् कहिले बन्लान ति चौकीका भवनहरू ?
कति चौकीहरूका आफ्नै भवनहरू छन् भने कतिपय चौकीहरू भाडामा बसीरहेका छन् । नयाँ चौकीका भवनहरू पनि बन्ने क्रममा छन् । कति चौकीहरूको जग्गा खोज्ने काम पनि भईरहेको छ । आफ्नै भवन भए मात्र राम्रो सेवा दिन सकिन्छ भन्ने हैन । सेवाप्रतिको भावना र जिम्मेवारी बोध छ भने चौतारामा बसेर पनि उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ ।
@ नेपाल प्रहरीको विश्वासमा पछिल्लो चरण जनविश्वास घट्दै गएको छ नि किन घटेको होला ?
पहिला र अहिलेको पुलिसिङमा धेरै फरक छ । अहिले पढेलेखेका र राम्रो करियर भएका प्रहरी अधिकृतहरू प्रहरी सेवामा हुनुहुन्छ । उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्दै नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा अहिलेको प्रहरी सक्षम छ । त्यसैले प्रहरीप्रति जनविश्वास घटेको छ भन्ने @कुरामा कुनै सत्यता छैन । समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन राख्ने कार्यमा नागरिक र प्रहरी बीचको सहकार्य र विश्वासमा अभिवृद्दी हुन जरूरी छ । हरेक नागरिक ले असल प्रहरीलाई आफ्नो साथी वनाउनु पर्छ । त्यसैगरी घर परिवारमा बच्चाले दुख्ख दियो या बच्चा रोयो भने फकाउन र खुशी पार्नुको सत्तामा बालबालिका रिसाउँदा धम्कीपूर्ण भाषमा पुलिस बलाइ दिन्छु भनेर अभिवाकले भन्यो भने बाल बालिकाको मनोविज्ञानमा प्रहरीप्रति नकरात्मक धारणाको विकास गर्दछ । समाजका हरेक मानिसले प्रहरी संगठनले गरिहेको काम कर्तव्यको बारेमा बोध गरेमा र गराएमा सकरात्मक र जनविश्वासको वातारण बन्दछ । समाजमा गलत केही भयो देखियो भने प्रहरीलाई खबर गर्ने सबै नागरिकले गर्नुपर्छ ।
@ घटनामा राजनीतिक संरक्षण बढी भयो भन्ने प्रहरीको पनि गुनासो हो त ?
समाजमालाई नेतृत्व तथा अगुवाई प्रदान गर्ने राजनैतिक दलहरूले नै हो । त्यसैले शान्ति तथा अमन चयन राख्ने प्रहरीको ईमान्दार प्रयासमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूले रचनात्मक सुझाव तथा सहयोग गर्नुपर्छ । कुनै पनि घटनामा राजनैतिक संरक्षण वा हस्तक्षेप हुन्छ हाेला जस्ताे मला लाग्दैन ।
@प्रहरीहरूसंगठनको जनविश्वासलाई कायम राख्न के गर्नुपर्ला त ?
जनविश्वास बढाउँदै लैजान प्रहरीले उत्कृष्ठ र व्यावसायिक सेवा नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्छ । नागरिकको समस्यालाई चाडोभन्दा चाडो रेस्पोन्स गर्नुपर्छ, हरेक प्रहरीहरू उच्च आचरयुत्त र निष्ठावान बन्नु पर्छ । जबसम्म गरीव, पिछडीएका र जोखीम समूह वा व्यक्तिहरूलाई न्यायमा सहज पहुँच हुदैन । तबसम्म दीगो शान्तिको कल्पना गर्न सकिदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि प्रहरीको ढोका सधै खुल्ला रहनु पर्छ । व्यावसायिक सेवासँगै प्रहरीले हरेक नागरिकहरूलाई सम्मान पूर्वक व्यवहार पनि गर्नुपर्छ ।
@रोल्पा जनयुद्वको उद्गम स्थल हो, प्रहरी र जनता बीचको अन्तरसम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ त ?
राजनैतिक परिवर्तनमा रोल्पा जिल्लाको आफ्नो छुट्टै पहिचान र महत्व रहेको कुरा अघि नै भनिसकँे । समुदाय र प्रहरी बीचको विश्वास अभिवद्धि गर्दै उत्कृष्ठ व्यवसायिक सेवाद्वारा नागरिकको मन जितेर प्रहरीका काम कारवाही र गतिविधीहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु ।
@ अन्तमा आफ्नो तर्फबाट रोल्पा र आम रोल्पालीलाई भन्नै पर्ने कुरा केही छ की त ?
रोल्पा अत्यन्त सुन्दर जिल्ला छ । पर्यटकीय सम्भावना पनि यहाँ रहेको छ । समाजमा दीगो शान्ति कायम गर्न सके मात्र विकास र सम्वृद्ध फड्को मार्न सक्छ । समाजमा विद्यमान रहेका विकृती, विसंगती र गैर कानूनी चरित्रहरूलाई नियन्त्रण गर्दै कानूनी दायरमा ल्याउन हरेक नागरिकले आफुलाई बिना वर्दिको प्रहरी हुँ भन्ने सम्झनु पर्छ । नागरिक र प्रहरी बीचको समन्वय, सहकार्य, सद्भाव र विश्वासले नै समाजमा शान्ति कायम गर्न सकिन्छ । असल प्रहरीलाई साथी बनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु
प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र कुमार पुनमगरको एक टोलिले जंकोटको पहिरो क्षेत्रको अनुगमन
गंगादेव गाउँपालिकामा ८ जना कोरोना पुष्टि, गाउँपालिका एक हप्ता सिल
जलजला यातायात थबाङसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने आज ट्रायल यात्रा सम्पन्न
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७३ पुष २४, आईतवार १६:०४ गते
मानसिंह बिक २०७३ साल पुस २४ गते रोल्पा जिल्लामा पछिल्लो समयमा यातायात क्षेत्रमा निकै प्रतिषपर्धामा भइरहेको छ । यसकै निरन्तरतामा जलजला...
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ आश्विन २४, शनिबार १३:३५ गते
बाल बिबाह हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैनः लालिगुराँस किशाेरी समूह अध्यक्ष सगुन बि.क. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पा जिल्ला शाखाको समन्वयमा र...
१०० जना दलितको घर बन्ने रोल्पामा
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७४ बैशाख २, शनिबार १३:२० गते
मानसिंह बिक २०७४ साल बैशाख २ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएपछि नेपाल सरकारले आर्थिक विपन्न तथा गरिवीको रेखामुनी रहेका...
जनयुद्धकै कारणले यो अमूल परिवर्तन भएको हो ः शहीदहरु नै यो परिवर्तनको मुख्य श्रेय हुन -वर्षमान पुनमगर अनन्त
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७४ फाल्गुन १, मंगलवार १५:४० गते २०७५ फाल्गुन १५, बुधबार ०७:५९ गते
मानसिंह बिक २०७४ फागुन १, रोल्पा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुनमगर ‘अनन्त’ ले जनयुद्धकै जगमा...
रोल्पाका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुहरुको आर. डि.टी. चेक नै नगरी धमाधम घर । जुन सुकै बेलामा पनि बोलाएर गर्न सकिने ।
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ बैशाख २२, सोमबार १३:१८ गते २०७७ बैशाख २२, सोमबार १३:२७ गते
रोल्पा समाचारदाता रोल्पा, २२ बैशाख । विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि रोल्पा नगरपालिका वडा नं. ४ लिबाङले क्वारेन्टाइनमा...